Trondro Aman-taonina No Maty Tamin’ny Fomba Hafahafa Tao Vietnam. Anisan’izany Ny Trozona · Global Voices teny Malagasy
Trondro Aman-taonina No Maty Tamin'ny Fomba Hafahafa Tao Vietnam. Anisan'izany Ny Trozona
Voadika ny 10 Jona 2016 5:15 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Nederlands, Italiano, Español, Français, 日本語, English
Mponina miezaka mamonjy trozona nihitsoka tao amoron-dranomasin'i Diễn Thịnh ao Vietnam. Sary: YouTube
Ity lahatsoratra nosoratan'i Nguyễn Linh Chi ity dia avy amin'ny Loa, tranonkalam-baovao sy fampielezam-peo tsy miankina mandefa tantara momba an'i Vietnam. Navoakan'ny Global Voices indray izany noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Nandritra ny roa volana farany, trondro aman-taonina no hita faty tao amoron-dranomasina afovoan'i Vietnam. Tao anatin'ny dimy volana, nahita trozona maty fito farafahakeliny ny mponina ao amin'ny faritanin'i Nghệ An, araka ny filazan'ny tranonkalam-baovao Lao Động. Nifanojo tamin'ny fahafatesan'ireo biby kely kokoa marobe anaty ranomasina izany fotoana izany.
Tamin'ny 25 May, raha nampiroborobo ny fihinanana hazan-dranomasina sy ny hetsika momba ny rano ny manampahefana ao amin'ny faritanin'i Quảng Bình, trozona milanja 17 taonina no hita faty tao amoron-dranomasin'i Thịnh Diễn.
Mampiseho ny ezaky ny manampahefana manavotra ilay biby ny lahatsarin'ny Amatuer nakarina tao amin'ny YouTube, saingy maty fotoana fohy taorian'ny namerenan'azy tany anaty rano ilay biby.
Roa andro taty aoriana, trozona iray hafa milanja 10 taonina indray -izay efa maty sy simba no —hita tao anatin'izany morondranomasina izany ihany. Raha vao nanomboka niakatra ny onja, natosiky ny manam-pahefana hiverina any an-dranomasina ny fatiny.
Na izany aza, niahiahy ny antony mampihetsika ny manampahefana i Thái Văn Dung, mpikatroka monina ao Nghệ An, hoy izy:
I agree that it makes sense to wait for the tide to rise to discard the carcass, but why did they do it in such a hurry in the dark? Why didn’t they wait to examine the cause of death?
Manaiky aho fa misy dikany ny fiandrasana ny fiakaran'ny onjan-dranomasina mba hanariana ilay faty, saingy nahoana no nataon'izy ireo maimaika tao anatin'ny aizina izany? Nahoana no tsy niandry ny fanadihadiana nahatonga ny fahafatesana izy ireo?
Iray amin'ireo mpikatroka maro i Dung izay mihevitra fa misy fifandraisana mivantana ny fahafatesan'ireo trozona sy ny fandefasana rano maloto ataon'ny orinasam-by Taiwaney Formosa, izay mpifanolo-bodirindrina amin'ny faritanin'i Hà tìnhi. Na izany aza, mbola tsy nahavita ny fanadihadiany momba ny fahafatesan'ireo trondro ny fitondram-panjakana. Manohy manohintohina ny fiainan'ireo mpanjono ao an-toerana ny olan'ny tontolo iainana ankehitriny, ary niteraka hetsi-panoherana goavana manerana ny firenena sy ny Vietnamiana ampielezana.
Noraisin'ireo mpanjono Vietnamiana toy ny zavaboahary masina hatry ny ela ny trozona. Raha nandà tsy haneho hevitra momba ireo fahafatesana hafahafa i Hanoi, nilaza ny mponina ao an-toerana fa mampiseho indray ny tsirambina ataon'ny manampahefana ny fahitana ireo faty vaovao.
Tsindrio eto ambany raha hihaino ny andiana fandefasam-peon'ny Loa momba ny olan'ny trozona maty sy ireo tantara vaovao lehibe hafa momba an'i Vietnam tamin'ny volana lasa:
4 andro izayShina
1 herinandro izayAmerika Latina
Merkel, Macron sa Biden? Tsia, i Shina no itokian'i Amerika Latina amin'ny resaka vaksiny
4 andro izayEoropa Afovoany & Atsinanana
Noho ny tsindry avy amin'ny fanjakana, nikatom-baravarana ny Team 29, ilay vondrona malaza indrindra amin'ny fiarovana araka ny lalàna ao Rosia
5 andro izayEoropa Afovoany & Atsinanana
Fidirana amin'ny fampiasa fandraketana an-tsarintany vaovao eny ankalamanjana any Okraina